सन्दिपले धोनीलाई बलिङ गर्न पाउने बलियो सम्भावना, प्लेईङ ११ मा पर्लान ? — Motivatenews.Com
सन्दिपले धोनीलाई बलिङ गर्न पाउने बलियो सम्भावना, प्लेईङ ११ मा पर्लान ?
काठमाडौं। दिल्लीमा नेपाली खलाडी सन्दिप लामिछाने पनि आबद्ध भएकोले नेपाली क्रिकेट प्रशंशकहरुको सबैभन्दा धेरै चासो दिल्लीको खेल र दिल्लीको टिममा सन्दिपले स्थान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा आज मंगलबार राति दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपरकिंग्स आमनेसामने हुदैँछन् । दिल्लीको होमग्राउण्ड फिरोज शाह कोटलामा आज बेलुका नेपाली समयअनुसार सवा ८ बजे सुरु हुदैँछ । दिल्लीले पहिलो खेलमा मुम्बई इण्डियन्सलाई पराजित गरिसकेको छ भने चेन्नइले बेग्लोरलाई पराजित गरिसकेको छ ।
पहिलो खेलमा सन्दीप लामिछानेले खेल्ने मौका पाएका थिएनन् । यद्यपि आजको खेलमा भने सन्दिप टिमको प्लेइङ ११ मा पर्ने सम्भावना बलियो छ । सन्दिपलाई दिल्लीले आज प्लेइङ ११ मा राख्ने पहिलो कारण हो आज खेल हुने मैदान । दिल्लीको फिरोज शाह कोटला, जहाँ आजको खेल हुँदैछ, स्पिनरको लागि सहयोगी पिच हो । यहाँनिर ध्यान दिइनुपर्ने कुरा के हो भने अघिल्लो आइपिएलमा सन्दिपले खेलेका ३ खेल यही मैदानमा खेलेका थिए । अघिल्लो सिजनमा दिल्लीले सन्दिपले खेल्न अवसर पाउनुभन्दा ठिक अगाडि दिल्लीको फिरोजशाह स्पिनरका लागि सहयोगी हुने भएकोले सन्दिपले मौका पाउन सक्ने आफ्नो वेबसाइटमा समेत लेखेको थियो । अहिले पनि त्यही मैदान भएकोले त्यही परिस्थिति लागू हुने हुँदा सन्दिपको सम्भावना बलियो छ ।
आईपीएलमा एउटा टिमले अन्तिम–११ मा बढीमा ४ जना मात्रै विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने नियम रहेको छ । आइतबार दिल्लीले मुम्बइबिरुद्ध तिब्र गतिका बलरलाई प्राथमिकता दिदै कागीसो रबाडा र ट्रेन्ट बोल्टलाई मौका दिएको थियो । यस्तै अर्का अलराउन्डर कीमो पाउल र ब्याट्सम्यान कोलीन इन्ग्रामलाई खेलाउदा सन्दिपले मौका पाएका थिएनन् । मुम्बइको वानखेडे तीब्र गतिका बलरलाई सहयोगी हुने हुँदा दिल्लीले रबाडा र बोल्टलाई खेलाएकोमा दिल्लीको पिच स्पिनर सहयोगी हुने हुँदा यी दुईमध्ये कुनै एक खेलाडी आज बेन्चमा हुने सम्भावना बलियो छ जुन स्थान सन्दिपले पाउन सक्छन् ।